पोखरा पल्टनलाई नमस्ते पीपीएल उपाधि ! | Hamro Khelkud
पोखरा पल्टनलाई नमस्ते पीपीएल उपाधि !
मंगलबार, कात्र्तिक २०, २०७५
पोखरा (हाम्रो खेलकुद) – भारतीय ब्याट्सम्यान रवि इन्दर सिंहले उच्च प्रदर्शन गरेपछि घरेलु टोली पोखरा पल्टनले पहिलो संस्करणको नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । मंगलबार पोखरा क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनल खेलमा चितवन राइनोजलाई ३ विकेटले पराजित गर्दै घरेलु टोली पोखरा च्याम्पियन बनेको हो ।
त्यसअघि टस जितेर पहिले पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पोखराले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १ सय ६० रनको योगफल तयार पारेको थियो । कप्तान पारस खड्काले ५१ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । ३७ बलमा पारसले ९ चौका प्रहार गरे । चितवनले पहिलो विकेटको रुपमा हरिशंकर साहलाई ८ रनमा गुमाएको थियो । त्यसपछि क्रिजमा रहेका कप्तान पारस र अनिलले दोस्रो विकेटको लागि रनको साझेदारी गर्दै इनिङ उकासेका थिए । चितवनको दोस्रो विकेट पतन हुदा ८५–२ को अवस्था रहेको थियो ।